Chromium sy Firefox Nightly: Tsy misy fanavaozana amin'ny Launchpad na Debian Backports | Avy amin'ny Linux
eliotime3000 | | fampiharana, GNU / Linux
Miarahaba antsika rehetra indray. Tamin'ity indray mitoraka ity dia tonga aho hiresaka momba ny mpitsidika Mozilla Firefox y chrome, izay Open Source ary ampiasaina amin'ny Windows sy Mac izy ireo ary koa amin'ny ankamaroan'ny distros GNU / Linux (na ny fanangonana ofisialy sy ny fork).
Na izany aza, tsikaritro fa rehefa misintona ny Mozilla Firefox avy amin'ny tranokala ofisialy aho dia nahita kinova voafintina tao amin'ny BZip amin'ny tarball sy amin'ny tranga Chromium, amin'ny endrika ZIP.
Raha Mozilla Firefox sy Chromium dia manamora ny famolavolan'ny distros amin'ny endriny samirery, amin'ny tranga Chromium dia tsy misy liana firy amin'ny fanolorana kinova izay farafaharatsiny misy azy sy mendrika loatra ahafahany mankafy azy io tanteraka. (Amin'ny tranga Google Chrome, azonao atao ny mahita fa misy fahalianana lehibe amin'ny fitazonana hatrany hatrany hatrany ny browser-nao, saingy miaraka amin'ny mpifaninana aminy amin'ny loharano misokatra dia misy ny fahalianana izay mamela zavatra maro maniry).
Miaraka amin'i Mozilla Firefox aho dia tsy nanana olana tamin'ny fitazonana azy io hatrany, satria saika ny distro rehetra dia miaraka amin'ny famoahana nataon'ny Mozilla Foundation (na i Debian aza. havaozina miaraka amin'ny hatetika mitovy noho ny ofisialy mitovy aminy ny fork), saingy Chromium dia manana distros sasany izay tsy manana kinova mitovy amin'ny kinova ofisialin'ny Google Chrome, toy ny ny raharaha Debian (Tsy manana backport akory izy na farafaharatsiny repo manokana toa an'i Iceweasel).
Ny tranga Ubuntu (mila ampiana ny repo fiarovana nomen'i Launchpad ianao mba hitazomana ny fonosanao havaozina ary toa hita fa nijanona tamin'ny kinova 25 izy io na dia tao amin'ny Lucid aza), ka nanapa-kevitra ny hampiasa aho script iray natao manokana hametrahana ny kinovan'ny Chromium isan'alina avy fomba saika mandeha ho azy avy amin'ireo mpisera forum Debian, satria amin'ny fomba ofisialy dia tsy mahita repos na Linux Mint izay tena fanavaozana avy amin'ny fianakavian'i Debian aho (any amin'ny distro hafa, mifanitsy amin'ny Google Chrome).
Raha afaka mahita repo aho hitahirizana ireo kinova Chromium tsy miovaova (na farafaharatsiny ny fananganana alina), dia tena tiako ny fanampiana. Amin'izao fotoana izao dia hanohy hampiasa ilay script aho mba hahafahako miasa miaraka amin'ny Build Chromium isan'alina (izany fanao izay vao avy nanafatra izany rehefa nampiasa Windows).
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Chromium sy Firefox Nightly: Tsy misy fanavaozana amin'ny Launchpad na Debian Backports
Ara-dalàna raha tsy hitanao ny Firefox ao amin'ny Debian, satria na OpenSource aza izy io dia manana ampahany (toy ny sary famantarana) miaraka amina fahazoan-dàlana mametra izay tsy mahatratra ny tanjon'ny Debian, noho izany dia mahita Iceweasel ianao.
Amin'ny Squeeze dia tsy haiko, fa ao amin'ny Debian Wheezy dia manana ny kinova Chromium farany tsy ho ela izahay. Amin'izao fotoana izao dia misy ny kinova: 26.0.1410.43-1.
Tsy manana olana amin'ny Iceweasel ao amin'ny Debian Stable aho, satria miasa ho ahy mitovy amin'ny an'ny Firefox (ny mozilla.debian.net backport no ampiasako hitazonana ny Iceweasel havaozina ary ampiarahina amin'ny andrana), saingy ao amin'ny Chromium dia olana iray raha mila manampy repo fanandramana ao amin'ny kinova Debian (amin'ny Testing dia toy ny hoe manampy backport ianao).
Raha te hampiasa ilay kinova fananganana isan'alina dia mila manao zavatra mitovy izay ampiasaina amin'ny fametrahana Firefox (manaova script hametrahana / manavao ny browser) ary manana farafahakeliny ny kinova 3 (efa nanandrana aho mampiasa ny kinova kernel tonga tampoka amin'ny PC-ko, fa toa miasa amin'ny Wheezy tsy misy olana).
Miaraka amin'ireo programa hafa toa ny LibreOffice, Skype ary / na Angry IP Scanner dia mora tamiko ny fametrahana azy, satria tsy nila nampiasa script fametrahana / fanavaozana aho, fa tsy mila mampiasa zavatra hafa ankoatry ny DPKG sy / na GDebi .
Tsy namotopototra ny antony aho, saingy nahagaga ahy fa ny kinovan'ny Chromium izay raha tsy diso aho dia navotsotra tamin'ny volana aprily dia efa ampahany amin'ny fonosana Wheezy, raha ny Iceweasel 17 kosa ny novambra dia tsy. Manantena aho fa tsy hitondra olana noho ny vao haingana.
Iza amin'ireo kinovan'ny Iceweasel no tondroinao? Amin'ilay Roll Release izay ao amin'ny mozilla.debian.net na mankany amin'ny ESR izay efa ao amin'ny Wheezy backport? Satria ny Iceweasel ananako dia 20 ary manana izany ao amin'ny Debian Squeeze aho: http://i.imgur.com/yavIei5.png (avy amin'ny mozilla.debian.net backport satria ny Squeeze backport dia mbola ao amin'ny 10 ESR).
Ho an'ny kinova default ho an'ny Wheezy izay 10.0.12 ary 3.5.16 ho an'ny Squeeze.
Noheveriko foana fa tsara ny hanaiky ny kinova 17.0 rehefa nivoaka izy io saingy tsy azon'izy ireo natao, navelany tamin'ny andrana ary tao amin'ny backport ho an'ny Squeeze of mozilla.debian.net.
Mahamenatra, fa mitombina ny fampiasana ny blackport Debian Squeeze avy amin'ny mozilla.debian.net raha tsy te-hanana risika amin'ny fampiasana ny repo fanandramana ianao (raha ny tena izy dia saika mitovy ny kalitaon'ny repo, fa tsy hampiditra repos avy amin'ny ratsy kalitao).
raffle dia hoy izy:
Misy toerana fitahirizana roa izay mitazona ny Chromium havaozina, iray maharitra (kinova 25.0.1364.172) ary ny fampandrosoana (27.0.1453.6), ny PPA tsirairay avy dia ppa: av-shkop / chromium sy ppa: av-shkop / chromium-dev
Valio ny sortega
Misaotra betsaka, fa aleoko ampiana ireo PPA amin'ilay taloha (miaraka amin'ny keyserver ary manova ny fisie "loharano.list"). Amin'ity fomba ity dia hialako ny olana amin'ny alàlana ara-pitantanana sy amin'ny sudo (satria efa nanjary tiako ny "su", sa tsy izany?).
Amin'ny debian, ny zavatra mora dia tsotra, raha te hijanona ao amin'ny sampana miorina ianao dia tsy maintsy manome anao ny hevitra fa tsy ho ao amin'ny kinova maoderina indrindra ireo programa. Raha te hanana ny kinova farany amin'ny programa ianao (na saika) ampiasao ny fitsapana na tsy milamina 😉
Faly aho miaraka amin'i Debian Stable, satria zara raha mampiasa programa vitsivitsy izay hajaiko hatrany (Mazava ho azy fa ny mpikaroka sy ny Skype). Fa ny an'ny Chromium kosa dia tsy nanao backport izy ireo indrindra ho an'ny fanontana azo antoka an'ny Debian tahaka ny ataon'izy ireo miaraka amin'i Iceweasel (izay, manome anao hisafidy na dia ny kinova aurora ary miasa ara-dalàna ao amin'ny Debian Stable).
Mikasika ny sampana fanandramana, mangataka amiko i Debian Stable momba ny lakilem-bahoaka mba hahafahana mampiasa amin'ny programa manokana.
Io Debian io amin'ny kinikany miovaova dia tsy azo vahana ary ny filaminana omeny anao rehefa mandeha ny fotoana dia manasarotra ny fanoloana azy io. Ity Debian Squeeze izay soratako ity dia napetraka hatramin'ny nanombohany, taona maro lasa izay ary androany no nanehoany ny lesoka voalohany ahy ny lesoka. Hita fa tsy vao nanomboka ny kisarisary noho ny tsy fisian'ny disk space gdm tsy afaka nanoratra firaketana ny rezistra. Namaha izany tamin'ny famafana ireo fonosana kisary sy bullshit hafa tamina tty aho, dia namboariko avokoa ireo fonosana rehetra ary namoaka izany Tsy mila olana intsony aho, mila mamerina manova ny kapila misy ny rafitra apetraka satria efa namboarina, ankoatr'izay tsy mijanona ho gaga aho fa rehefa afaka taona maro tsy misy fikojakojana dia miasa miaraka amin'ny tsiranoka mitovy amin'ny andro voalohany.
Ary izany no antony itiavako an'i Debian: nilaozana an-taonany maro ary indray andro dia ampodinao io ary mandeha foana ara-dalàna.
Eo amin'ny sisiny ny kinova Chromium vaovao. Ny kinova vaovao indrindra an'ny Iceweasel dia amin'ny andrana.
Ny olana dia tsy miaraka amin'i Iceweasel (misaotra fa mampiasa ny backport mozilla.debian.net izay mifanitsy amin'ny repo andrana amin'ny kinova, beta ary aurora), fa miaraka amin'i Chromium, izay tsy azoko ampidirina ilay repo andrana. Chromium satria miorina tsara aho (amin'ny fitsapana dia azonao atao ny manampy ny repo tsy misy olana).
Ny marina dia tsy miova firy eo amin'ny fampiasana ny chromium 17 na 18 an'ny 25 sy XNUMX ..., ary ny fiheverana bebe kokoa fa ny chromium dia tsy manana dipoà flash player amin'ny toerana misy anao, ka ataovy am-pilaminana ny fanahinao, na ampidino chrome avy amin'ny tranokalany
Efa mampiasa Google Chrome ho an'ny Linux aho, saingy miasa miaraka amin'ny mpiziriziry roa tonta satria manana kaonty GMail roa aho.
Ho fanampin'izay, tao amin'ny Google Chrome no namonoako ny Pepper Flash Player satria tsy dia nahay lavitra noho io Flash Player 11.2 io ihany izay natolotr'i Adobe (misaotra fa ao amin'ny repo ofisialy dia misy fonosana .deb izay misy script iray izay nampidina sy nametraka ny mpilalao flash).
Aleo ekentsika fa ny debian press (ilay misy ankehitriny) ao anatin'ny telo andro dia ho lasa antitra, noho izany tsy lojika ny fisian'ny fanavaozana fonosana misy kinova vaovao na dia any amin'ny seranam-piaramanidina aza.
ary azo inoana fa hiafara amin'ny maha sarotra kokoa azy io hanohizana hanana ny kinova farany amin'ny programa toa ny chromium sy ny iceweasel, ankoatry ny zavatra hafa rehetra rehefa mivoaka any amin'ny arisiva ny fametahana.
Mety ho izany, saingy tao amin'ny tranonkala ofisialin'i Debian, tsy mbola nanambara ofisialy izy ireo hatreto (fa vaovao ankehitriny no re siosio ao amin'ny lisitra mailaka), satria tsy maintsy havoaka amin'ny fomba ofisialy ao amin'ny faritra vaovaon'izy ireo.
tamin'ny farany dia lasa antitra ny fametahana araka ny efa nolazaiko teo aloha.
Tena niharihary fa tsy hanohy mametraka kinova ankehitriny amin'ireo programa izy ireo raha efa handeha hamaky any amin'ny arisiva.
Raha izaho manokana dia tsy tombontsoako ny mandeha miaraka amin'ny kinova fanaova farany an'ny browser, satria ny add-ons sy ny extensions izay ampiasain'ny sasany amintsika dia tsy novolavolaina niaraka tamin'izay, ary rehefa nohavaozina ny browser dia tsy misy ilana azy intsony ny fanampiana.
Tsara, nieritreritra aho fa izaho irery no olona adala eto izay nisafidy ESR toy izay Rapid Release.
Amin'ny ankapobeny dia tsy misy izany raha tsy amin'ny firefox sy ny fomba fanitarana azy taloha.
Aza ilazana amiko, satria ao amin'ny Chromium 25 izay ananako dia misy ny rindranasa izay tsy miseho raha tsy manana ilay kinova izay mitovy amin'ny Google Chrome aho.
Firefox sy Debian dia manana ny anjarany amin'ny primitivism, na izany aza amin'ny tranga manokana an'ny Firefox dia heveriko fa tsy izany.
Fa kosa, zavatra hafa no miseho: ny fanitarana Chrome / Chromium dia tena mitovy amin'ny fanitarana Opera satria mamela ny ampahany voafaritra voafaritra tsara amin'ny faritra azo zahana sy voalahatra ao amin'ny JS, izany no antony ahafahana mamelona sy mampiato azy ireo rehefa Mora manidina aho
Raha ny momba an'i Firefox, ny mifanohitra amin'izany, ny extensions dia voarindra amin'ny alàlan'ny rafitra XUL an'ny Firefox manokana, izany no antony matanjaka be izy ireo - raha ny tena izy dia rindranasa bitika kely izy ireo- ary tena mifamatotra amin'ny mpitety tranonkala, misy fiovana vaovao eo amin'ny misy fiantraikany amin'ny fanitarana napetraka ny browser.
Ao amin'ny Firefox / Iceweasel / IceCat dia miasa izy ireo raha toa ka misy mandroaka ireo fanitarana; Ao amin'ny Chromium / Google Chrome, azonao atao ny mampiasa ny extensions nefa tsy voatery hiankina amin'ny rafitra amin'ny ankamaroan'ny tranga.
Miaraka amin'ny Firefox / Iceweasel, azonao atao ny misafidy kinova iray izay manome anao fanampiana lava (amin'ny tranga ESR), fa tsy ao amin'ny Chromium no misy an'io.
Mampiasa Chromium aho amin'ny ankapobeny mba hahafahana mizaha toetra samihafa izay ampidirina amin'ny HTML5 / CSS3 sy ireo tranonkala hafa izay manavao. Raha azonao atao ny manara-penitra ireo fiteny ireo faran'izay haingana, dia tsy mila miantehitra amin'ny famoahana vaovao ianao.
Debian dia namorona ny forfon'ny firefox taona maro lasa izay, tadidiko fa betsaka ny fitarainana momba an'io, miampanga azy ireo ho Taliban ho sary famantarana (na mozilla na debian). Tsy dia tian'i Debian ny manova kinova "iray manontolo" isam-bolana, ny fanamafisana dia ny fitoniana fa tsy ny manana ny farany. Tsy dia mora kokoa ny mametraka sy manavao ny fonosana tar.bz2 ho an'ny mozilla amin'ny debian sy ubuntus ajanona, mila esorinao ao anaty folder system fotsiny izany ary hamorona ny fidirana. Raha misy mila azy dia mamela lisitra baiko vitsivitsy eto aho http://paste.desdelinux.net/4767 ka dia manao izany amin'ny baiko tokana izy ireo fa tsy mila repository na browser hafa akory aza hampidinana ilay fonosana, Regards
Misaotra betsaka amin'ny script. Raha ny marina dia mampiasa Iceweasel 20 aho (kinova izay mitovy amin'ny Firefox) izay azoko tamin'ny mozilla.debian.net ary tena mahomby amin'ny Debian Stable ahy.
Ho fanampin'izany, ny fahombiazan'ny Firefox sy ny Iceweasel dia mitovy ihany, ny tsy fitovizan'ny Firefox ofisialy miaraka amin'ny fiarahamonina Firefox dia ny tsy fisian'ilay fanavaozam-baovao hita ao amin'ny varavarankely "About", ho fanampin'ireo forks toa an'i Iceweasel sy IceCat mazàna dia manana patch iray na fanovana hafa (GNU IceCat manakana ny famonoana Flash Player ary manery ny fampiasana plugins maimaimpoana toa ny Gnash, ankoatry ny IceWeasel tany am-boalohany).
Fanontaniana maro kokoa noho ny lahatsoratra bilaogy.
Raha ny tena izy… dia fanontaniana forum.
Mamelà ahy noho ny fanoratako amin'ny maody [forum] [/ forum], fa indraindray lafiny maro no tsy manasongadina toy ny tsy fahampian'ny homogeneit ao amin'ny kinova Chromium (ankehitriny saika ny distro rehetra dia ao amin'ny kinova 26, izay ankehitriny ny kinova ofisialin'ny Google Chrome), fa farafaharatsiny Firefox sy forks dia mitovy daholo (amin'ny tranga Iceweasel, ny mozilla.debian.net backport dia ao amin'ny kinova 20 amin'ny kinova ofisialy, ary koa ny kinova 21 amin'ny beta ary 22 ao aurora).
Tsy miaraka amin'ny lohahevitra resahina io, fa misy ifandraisany amin'ny firefox
Raha ny fahitana azy, io voalazanao io dia mifanohitra amin'ny filozofia an'ny Mozilla Foundation: mpitety tranonkala malina ary manaja ny fahazarana amin'ny Internet.
Libreoffice azo alaina ho an'ny Android (amin'ny kinova alohan'ny alfa)